Global Voices teny Malagasy » Libanona: Vehivavy Ivoariana Nitaky Karama Dia Natosika Avy Eny Amin’ny Rihana Faha-6 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Jolay 2014 18:23 GMT 1	 · Mpanoratra Joey Ayoub Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Cote d'Ivoire, Libanona, Mediam-bahoaka, Sendikà, Zon'olombelona
Ren'ny Koaci.com  any Côte-d'ivoire fa nisy vehivavy Ivoariana hita faty taorian'ny voalaza fa nanosehana azy avy any amin'ny rihana faha-6 amin'ny tranobe iray, taorian'ny fifamaliana tamin'ny mpampiasa azy momba ny fandoavana ny karamany.
Mitatitra i Carolle Feby ao amin'ny Koaci.com fa [fr]:
Maty ny vehivavy Ivoariana iray taorian'ny nanosehan'ny mpampiasa azy avy eny amin'ny rihana faha-6 taminà tranobe iray rehefa nitaky ny karamany tao Beyrouth, Libanona.
Tanoralahy Kamerone no nitatitra ny zava-nitranga ho an'ny Koaci.com, taorian'ny fitantaràna avy amin'ny anabaviny, izay mpifanolo-bodirindrina tamin'ilay maty.
Tovovavy Ivoariana iray tokony ho roapolo taona eo ho eo no hita faty tery ambanin'ny tranony.
Araka ny voalazan'ilay mpifanolo-bodirindrina ratsy vintana, izay tsy nolazaina ny anarany, dia mety natosiky ny mpampisa azy avy eny amin'ny rihana faha-6-n'ilay tranobe ao Asharif ilay tovovavy, tanàna iray ao Beyrouth, Libanona, ny Talata 1 Jolay.
Nitaky ny karamany izy, ary ilay rangahy izay hita tezitra tamin'io fitakiana io, no mety nanosika azy noho ny hatezerany.
Nandao an'i Côte d'Ivoire efa an-taona maro ity vehivavy mpila ravin'ahitra ity mba handeha hiasa ho toy ny mpampandroso sakafo ao Libanona, toy ireo tovovavy Ivoariana marobe ihany.
Efa malaza loatra ny tantara ratsy azo lazaina ho mampalahelo mianjady amin'ireo vehivavy Ivoariana miasa ao Libanona.
Volana vitsy lasa izay; taorian'ny nitantaran'ny Koaci.com, dia nisy andianà vehivavy afrikana nampodiana avy any Libanona rehefa afaka nandositra avy any amin'ny mpampiasa azy ireo izay nampijaly ara-batana sy ara-tsaina azy ireny
Indrisy fa efa tranga mahazatra io any Libanona sy ireo firenena Arabo mampiasa ny rafitra Kafala, na ny ‘fiantohana’. Araka izay anazavan'ny Human Rights Watch azy ao anatin'ny tatitra 2014 nataony momba an'i Libanona :
Nesorina tao anatin'ny sehatry ny lalàna ireo mpiasa an-trano mpila ravin'ahitra ary iharan'ny fepetra feno teritery momba ny fifindra-monina mitofotra amin'ny fisian'ny mpiantoka—ny rafitra kafala— izay mametraka ireo mpiasa an-trano ho mora iharan'ny fanararaotana sy ny fanaovana tsinontsinona. Raha toa Charbel Nahhas, Minisitra teo aloha nisahana ny asa, nanambara tamin'ny Janoary 2012, fa mety hojereny ny hanafoanana ny rafitra kafala, tsy vitan'i Salim Jreissati, Minisitry ny asa ny nanao izany tamin'ny 2013, na nametraka tolo-dàlana hiarovana ireo mpila ravinahitra vinavinaina ho 200.000 eo ho eo ao amin'ny firenena. Tamin'ny Jolay, mpampiasa iray no nohelohin'ny fitsarana iray misahana ny heloka bevava hisazy roa volana an-tranomaizina, handoa onitra, ary noterena handoa tamby (damages and compensation) taminà mpiasa an-trano mpila ravinahitra izay tsy naloany efa an-taona maro ny karamany. Kanefa, mitohy miatrika sàkana araka ny lalàna sy mety hiharan'ny fandroahana hody ireo mpiasa an-trano mila ravinahitra mitory ny mpampiasa azy noho ny teritery apetraky ny rafitra fanomezana fahazoan-dàlana mivahiny an-tanin'olona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/09/61576/
 tatitra 2014 nataony momba an'i Libanona : http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/lebanon